Honduras dia manolotra toera-misy samy hafa sy toerana vaovao hanaovana fivorian'ny vondrona
Home » Toerana fitsangatsanganana » Honduras dia manolotra toera-misy samy hafa sy toerana vaovao hanaovana fivorian'ny vondrona
Enga anie 8, 2018
Avy any Copán - miaraka amin'ireo toerana arkeolojika malaza eran'izao tontolo izao sy ivon-toeran'ny fivoriambe natao hanombohana amin'ny taona 2018 - ka hatrany Roatán, Island Bay iray idyllic izay manolotra hetsika ho an'ny vondrona toy ny filomanosana miaraka amin'ny jaguars ary ny antsitrika manerantany: Honduras dia vonona hametraka ny sehatra manerantany -ny hetsika an-kilasy izay manolotra mpanatrika traikefa tokana dia tsy hohadinoin'izy ireo tsy ho ela. Ny Ivon-toeram-pizahan-tany any Honduras dia miasa mba hanamafisana ny toerana misy ny firenena amerikanina afovoany ho tanjona lehibe indrindra ho an'ireo mpandrafitra ny fizahan-tany tarika mitady vahaolana hafa amin'ny quo quo.
“Ny mampiavaka an'i Honduras ho lohatenin'ny fivoriana, ny fandrisihana, ny fihaonambe ary ny seho fampiratiana dia ny fahafahany mikarakara vondrona maro karazana izay misy safidy isan-karazany amin'ny lafiny fametrahana, ao anatin'izany ny faritra be tendrombohitra, tanàna fanjanahan-dranomasina ary ranomasina Karaiba, hiangona hetsika anisan'izany ny ambony sy ambanin'ny rano, ny arkeolojia, ny fahasalamana ary ny fialan-tsasatra ”, hoy ny talen'ny talen'ny fizahan-tany ao Honduras, Emilio Silvestri. "Ny firenentsika dia dodona ny hanolotra toerana anaovana hetsika tsy hay hadinoina ary manana fotodrafitrasa, ao anatin'izany ny ivon-toerana misy ny fihaonambe sy hotely mihaja izay vonona handray vondrona akaiky sy hetsika lehibe."
Rava Maya ary Ivotoerana fivoriambe vaovao any Copán
Any Honduras andrefana be tendrombohitra no misy an'i Copán. Miaraka amin'ny maritrano neoclassical sy ny arofan-vatolampy tery, afaka mankafy ny toerana mahafinaritra 10 minitra miala ny Ruins Maya an'i Copán, izay heverina ho “Athens of the Maya World” ireo mpandeha. Ho fanampin'ity tranonkala arkeolojika manaitra ity, ny mpandeha dia afaka miaina ny làlan'ny kafe Honduran izay mamela fidirana mora foana amin'ny fitsidihana ny fiompiana kafe eo an-toerana na mitsidika ireo vorona hafahafa ao amin'ny Macaw Mountain Bird Park.
Ao afovoan-tanàna, ny trano fandraisam-bahiny Marina Copán misy efitrano 49 dia manome toerana mahaliana ho an'ny fivoriana mahomby, miaraka amin'ny olona hatramin'ny 120. Fanampin'izany, amin'ny fiandohan'ny taona 2019, hanokatra varavarana ho an'ny vondrona lehibe kokoa ny Marina Copán Convention Center, izay mahazaka vahiny 800. Hanolotra fitaterana mankany sy avy amin'ny hotely ny ivon-kevitry ny fivoriambe ary minitra vitsy monja miala ny rava no misy azy. Ankoatra ny Marina Copán, ny safidin'ny hotely hafa any an-toerana dia ahitana ny Clarion Hotel Copan Ruinas sy ny Hotel Camino Maya.
Fivoriana maoderina any San Pedro Sula
Any amin'ny Lohasaha Sula, San Pedro Sula no renivohitra indostrialy any Honduras. Ny mpitsidika dia afaka mitsidika tranombakoka tantara sy anthropology, izay manisy antsipiriany ny fifindran'ny firenena hatramin'ny andron'i Columbian ka hatramin'izao, na miaina ny fanatitrany voajanahary ao amin'ny Farihy Yojoa, toerana mafana ho an'ireo mpikaroka sy mpanao vorona.
Ny ivon-kevitry ny Fifanarahana Copántl any San Pedro Sula dia neken'ny Forbes Mexico ho ivon'ny fivoriambe maoderina indrindra any Amerika Afovoany. Miaraka amin'ny gorodona roa misy efitrano 19, ity habaka mahavariana ity dia manome fahafaha-maherin'ny 7,000, ao anatin'izany ny 5,000 ao amin'ny efitrano malalaky ambany. Manolotra trano fandraisam-bahiny misy efitrano 191 koa izy io ary mamela safidy mety hipetrahana ho an'ny mpanatrika. Ankoatr'izay, misy franchise maro amin'ny hotely iraisam-pirenena any amin'ny faritra misy an'io Intercontinental Real San Pedro Sula sy Hilton Princess San Pedro Sula.
Fivorian'ny Nosy Intim ao Roatán
Roatán no lehibe indrindra amin'ireo nosy telo Bay any Honduras. Ity toerana itodiana ity dia malaza amin'ny alàlan'ny akaiky azy amin'ny Mesoamerican Reef - ny haran-dranomasina lehibe indrindra amin'ny hemisphere andrefana ary ny faharoa lehibe indrindra manerantany taorian'ny Great Barrier Reef. Ao an-drenivohitra Coxen Hole, ny mpitsidika dia afaka mankafy fivarotana tsy manam-paharoa feno souvenir tena izy ary miaina ny kolontsain'ny nosy.
Ireo mpanomana fihaonana mitady toerana iray voahodidin'ny rano Karaiba mahavariana dia tokony hijery lavitra noho ny ivon-toerana misy ny hetsika ao amin'ny Pristine Bay Resort. Ity trano ity dia manolotra efitrano fihaonambe telo, ao anatin'izany ny efitrano malalaky ny ranomasina 4,000 toradroa izay mahazaka olona 60. Ny mpanomana fihaonana dia afaka mamorona làlan-kaleha maro karazana miaraka amin'ny safidin'ny hetsika atao ao anaty vondrona. Ny toeram-pialan-tsasatra dia fonenan'ny The Black Pearl, taranja golf 18 misy lozisialy ary mitaingina sambo fohy miala ny Havoana Mesoamerika. Ny fitsangatsanganana antoandro dia mety ahitana fitsidihana an'i Little French Key, nosy tsy miankina iray izay mitaingina soavaly ary toeram-pamonjy biby izay azon'ny vahiny milomano miaraka amin'ny jaguars.
Fitsaharana sy rendrarendra ao Tela
Ho an'ireo mpanomana fihaonana mitady toerana izay manome fahafaha-miala sasatra ny mpanatrika dia manome fialan-tsasatra mangina ny morontsiraka avaratry Honduras. Tela dia tranon'ny zaridaina Botanika Lancetilla izay ahafahan'ny vahiny mivezivezy amin'ny tionelina volotsangana ary mahita vorona hafakely, ny Jeannette Kawas National Park dia manome zaridaina ala sy valan-javaboary Punta Izopo, izay ahafahan'ny mpitsidika manjono miaraka amin'ny rajako.
Iray amin'ireo toerana itadiavana indrindra fihaonana sy fihaonana amin'ny fanentanana ny firenena eto. Indura Beach & Golf Resort, ampahany amin'ny CURIO Collection nataon'i Hilton, dia manolotra ivon-toerana fihaonambe manara-penitra izay afaka mandray vahiny 400. Aorian'ny fivoriana dia afaka miala sasatra amin'ny torapasika tsy miankina amin'ny hotely ny mpanatrika na mankafy ny iray amin'ireo spaoro malaza indrindra eto amin'ny firenena, Maina Spa, izay manolotra fitsaboana ara-tsindrimandry avy amin'ny Honduran toy ny fikolokoloana voanio sy ny otrikaina kakao Maya
United Airlines: ny volana aprily 2018 dia nanamafy ny fifamoivoizana 5.1 isan-jato
Hotely Ramada Marshall izao eo ambany fitantanana vaovao